”Kaligay ayaan ka badbaadey 65 qofood oo aannu wada tahriibayney!” – Nin ka sheekeeyey qiso qamuunyo badan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Kaligay ayaan ka badbaadey 65 qofood oo aannu wada tahriibayney!” – Nin...
”Kaligay ayaan ka badbaadey 65 qofood oo aannu wada tahriibayney!” – Nin ka sheekeeyey qiso qamuunyo badan
(Hadalsame) 23 Nof 2021 – Dejene Degefa oo 18 jir ah wuxuu ka soo gudbay xadka Itoobiya iyo Kenya ay wadagaan ee Mooyaale.
Dejene oo waxbarashada ka gaaray illaa iyo fasalka shanaad ayaa u adkeysan waayey dhibaatada qoyska haysta wuxuuna go’aansaday inuu raadsado shaqo dhaanta falashada beerta.
Xabsigana waxay ku jireen laba maalmood. “Sida naloo soo daayey iyo cidda na soo deysay ma garanayo, balse waxaan u maleeynayaa raggi na tahriibinayey iney askarta lacag siiyeen sidaana ay nagu sii daayeen”.
“Dadka safarka igu wehlinayay tiradooda wey isbedbeddeshaa Shan, Toban, Labaatan ilaa iyo Soddon ayey mararka qaar gaaraan,” ayuu yiri.
“Dadka na tahriibinayana wey isbedbedelayeen iyaguna, mid marka uu meel na gaarsiiyo mid kale ayuu nagu wareejiyaa,” ayuu yiri Dejene oo hadalka sii wata.
Qoraalka sawirka, Dejene oo dhalinyaro la fadhiya
Qayaastii waxaa la joogay 9-10-ka fiidnimo, maadaama aan garaneyn saacadda la joogay,” ayuu yri Dejene oo xusuusanayo silici ku qabsaday deegaanka Teete oo ku yaalla waqooyiga-galbeed ee dalka Mozaambiik.
“57 qof ayaa ahayn”, ayuu yiri. “Dadka tahriiba ka shaqeysta ayaa na kaxeeyey waxayna na geeyeen waddo jaay ah oo aysan gawaaridu ku badneen, cabbaar markaan halkaas joognay waxaa nalagu soo biiriyey 21 qof oo kale, markaasay tirada noqotay 78 qof. Kaddibna raggi wax tahriibinayey waxay keeneen Koonteynar ay isyiraahdeen 78 qof ayuu qaadi karaa, Koonteynarka ayey rabeen in dalka Koonfur Afrika nagu geeyaan.
“Koonteynarka marka la keenay waan diidnay oo waxaan dhahnay geli meyno, qaar cagaha wax ka dayay xataa wya jireen, hase yeeshee, tahriibiyeyaashu waxay billaabeen iney ulo, bud iyo faasba nala dhacaan sidi ay noo garaacayeen ayey dhammaanteen na geliyeen Koonteynarkii ay soo diyaarsadeen.
“Dhalinyaradi tahriibka igu wehlisay ee Konteenarka lagu guray iyaga oo og khatarta ka dhalan karta haddii lagu soo xiro wey baryootameen si looga soo saaro balse tahriibayeyaashi dhagaha ayey ka fureysteen albaabka ayeyna korka nooga xireen.”
“Marka uu dhaqaaqay gaarigi aan saarneyn qeylo ayaan bilaawnay.
“Hal gabar ayaa nala socotay, waxay ku qeylineysay ‘rag baad tihiine Koonteenarka maad jebisaan aaway xooggiini?’, waxayna nagu dhiirrineysay inaan Koonteenarka lug iyo gacanba aan la dhacno balse ma jirin cid na maqasha ama noo jawaabta.
Wuxuu sheegay: “Gabadhi nagula jirtay Konteenarka markiba wey dhimatay, iyada oo weliba baryootameysa oo leh halkan iga saara. Aniguna waan daalay oo tabarti ayaa iga dhammaatay marki dambana waan miir daboolmay, hase yeeshee, gaarigi aan saarneyn socodkiisa ayuu iska sii watay.”
“Qayaasti 5-ti subaxnimo markaan soo miiraabay waxaa arkay albaabki oo furan, markaan hareeraheyga fiiriyey waxaan arkay raggi aan wada soconnay oo wada meyd ah oo lugaheyga hoos jiifa. Waxaanna maqlayey oo aan xusuustaa askar leh ‘ma Itoobiiyaan baad tihiin?'”
“Dadki aan wada tahriibeynay oo 65 ay Itoobiyaan ahaayeen keligeey ayaa ka badbaaday, 64 ta kale way dhinteen”, ayuu yiri wiilkan dhallinyarada ah ee ka sheekeeyay xaaladdii uu tahriibka kala kulmay.
Dejene Degefa, ka dib markii uu dhacdadaas ka badbaaday keligii waxaa dalkiisa inuu dib ugu laabto ka caawiyey hay’adda IOM.
“Walaashey ka weyn ayaa marka hore taleefanka iga qabatay wey naxday taleefankana wey xirta, waxyar kaddib ayaan ku celiyey markaas ayey sii fiican iila hadashay reerka intiisa kalan iigu dhiibtay,” ayuu yiri Dejene.
Itoobiya oo “dil ku xukumi doonta” qofki lagu hela tahriibin
“Wixi hadda ka dambeeya haddii aan xataa shaqa waayo oo ay gaajo kasta i qabato lagama yaabo inaan ku fikiro tahriib iyo Koonfur Afrika dambe, tahriib waxaa dhaama adiga oo dalkaada hooyo ka dawarsado”, ayuu yiri Dejene degefa oo tahriibka ka soo badbaaday oo u warramay BBC Amharic.
Dejene iyo rag kale oo ay hay’adda IOM ka caawisay iney dalkooda ku laabtaan waxaa la geliyey karantiil 14 maalmood ah.
Previous articleBoqorka dal Yurub ah oo abaalmarin guddoonsiiyey Gabar Soomaali ah & waxa ay ku galabsatay (Dhegeyso warkeeda)
Next article”Ninka ”diley” wuxuu kasoo boodey dabaqa 8-aad!” – Gabar BBC u shaqaynaysey oo ”amaandarri” uga soo tagtay Addis Ababa oo Nairobi lagu diley!